FLEETGUARD LF3524 Saliida / Saliida shaandhada MITSUBISHI Soosaarayaasha iyo alaabada Mashiinka | Hertz
Muhiimadda saliidda mootada nadiifka ah
Saliida mashiinka nadiifka ah waa muhiim maxaa yeelay hadii saliida laga tago iyadoo aan la sifeynin in mudo ah, waxay ku buuxsami kartaa waxyaabo yaryar oo adag oo xirxiran kara dusha mashiinkaaga. Saliidaan wasakhda ah waxay xiran kartaa qaybaha mashiinka mashiinka mashiinka saliida waxayna dhaawici karaan dusha sare ee mashiinka.
Lambarka OEM TL1012
Bedelida FLEETGUARD LF3524
Codsiga KOBELCO: SK200LC MD120
Dhexroor Ballaca Jirka: 93.4mm Dhererka: 98mm Cabbirka Xajmiga: M18 * 1.5
Sharaxaad Sifee saliida Lube
Astaamaha Miiraha saliida ayaa ka caawiya ka saarista wasakhda saliida mishiinka baabuurkaaga oo iskudarsan kara waqti kadib maadaama saliida ay nadiifineyso mashiinkaaga.
Ka dib marka miiraha saliidda la isticmaalo muddo cayiman, wasakh badan ayaa u hoggaansami doonta curiyaha shaandhada, markaa miiraha waa in si joogto ah loo beddelaa. Guud ahaan marka la hadlayo, miiraha saliida iyo saliida waa in isla mar la badalaa. Sidan oo kale, waa faa'iido in la kordhiyo nolosha adeegga mishiinka. Gawaarida badanaa la isticmaalo, miiraha saliida waa in la badalaa 7500 kiilomitir kasta. Xaaladaha daran awgood, sida wadista gawaarida badan ee waddooyinka boodhka ah, waa in la beddelaa 5000 kiiloo mitir kasta.
Sidee miirayaasha saliidu u shaqeeyaan
Filterka banaanka waa qasacad bir ah oo leh goomaato wax lagu xiro taas oo u oggolaaneysa in si adag loogu haayo dusha matoorka dushiisa. Saxanka salka u ah gasacada ayaa haya goomaha waxaana ku daloolan daloollo ku wareegsan agagaarka gaaska. Dalool dhexe ayaa loo duubay si ay ula jaanqaado isku-darka shaandhada saliidda ee mashiinka. Qasacadda gudaheeda waxaa ku jira maaddada shaandhada, oo inta badan laga sameeyo fiber-ka synthetic. Mashiinka mashiinka mashiinka saliida wuxuu si toos ah ugu dhaqaajiyaa shaandhada, halkaasoo uu ka soo galayo godadka ku jira wareega saxanka salka. Saliida wasakhda ah ayaa la mariyaa (cadaadis ayaa lagu riixayaa) iyada oo loo marayo warbaahinta shaandhada oo dib loogu soo celiyo daloolka dhexe, halkaasoo ay dib ugu gasho mashiinka.
Doorashada shaandhada saliidda saxda ah
Inaad u doorato shaandhada saliidda saxda ah gaarigaaga waa muhiimadda ugu weyn. Inta badan miirayaasha saliidu waxay umuuqdaan kuwo aad isugu eg, laakiin kala duwanaanshaha yar yar ee dunta ama cabirka goomaha ayaa go'aamin kara in shaandhe gaar ahi ku shaqeyn doono gaarigaaga iyo inkale Habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo shaandhada saliidda aad u baahan tahay waa adigoo la tashanaya buuga mulkiilahaaga ama tixraaca buugga qaybaha. Isticmaalka shaandhada khaldan waxay sababi kartaa saliid inay ka soo baxdo mashiinka, ama shaandho aan fiicnayn ayaa dhici karta inay dhacdo. Labadan xaaladood midkood ayaa u horseedi kara mashiinka dhaawac culus.
Efficiency Wax-ku-oolnimada sare, qalabka isdaba-joogga ah ee la duubay ayaa ka qaada dhoobada si loo ilaaliyo qaybaha mashiinka iyo ugu badnaan adeegga u dhexeeya
■ warbaahinta si looga saaro wasakhda saraysa iyo awoodda socodka qabow, taasoo keenta nolol inji dheer
■ Mashiinku wuxuu ka helaa saliida aadka loo nadiifiyey qaybta iskuxirmay ee tooska ah qaybaha ay ku badantahay halka looga baahan yahay, halkii dib loogu celin lahaa salka saliida.
Xirxirida dhexdhexaadka ah: Kartonka ku jira gudaha, kiiska alwaaxa ka baxsan ama ku habboon sida loo codsado.
Hore: OEM Heerka FLEETGUARD LF3587 Shaandhada Saliida / Lube ee Mashiinka Naaftada ah
OEM Standard FLEETGUARD LF3587 Oil / Lube filter ...
FLEETGUARD LF3995 Lube filter for Truck, tracto ...
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Filimka LF3664